တိုက်ခန်းငှား အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Lucky Lucky
-ရန်ကင်း၊ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာ၊ 3rd floor (4 လွှာ) (900 sq-ft)
-master room (1), single room (2).
Aircon (2), ကိုရီးယားပါကေး.
-7သိန်းခွဲ (750,000 ks)